Dhibaatooyinka Laga Dhaxlo Furiinka - Daryeel Magazine
Dhibaatooyinka Laga Dhaxlo Furiinka
Marka aad sifican uu eegto nolasha bini,aadamka waxa ugu muhiimsan waa guurka sidaas darted ayaa dadka badankiisu uu arkaan guuldaro
Ruun ahaanti dhibatada furiinka kuma so kobi karno qoral ama hadal lakain hadana waxan jeclaystay in aan wax ka idhahdo dhibatada furiinka dhibatada furinku waa mid leh khasare farabaadan una gaysata dhibato lamanha is furaya iyo bulshada ay ku dhex nolyihiin .
Hadaba wakhtigan oo uu aad uu tiro batay furinku ayaa leys waydinaya su,aasha ah maxa keenay furiinka? Inkasto su,aashan qaf kastaba uu si uga jawabayo ayaa hadana lagu kala duwan yahay waxa keena furinka .
marka aad sifican uu eegto nolasha bini,aadamka waxa ugu muhiimsan waa guurka sidaas darted ayaa dadka badankiisu uu arkaan guuldaro ku timii gurka. Waxa keena furiinku waa wax aad
u adag majiro lamana helayo maanta qoys aan is khilafsanayn haba kala darnaado khilaaf kuye,hase yeeshe sababha qoyska uu horsed kara furiinka ayaa dadka ku takhasusay waxay sheegen in dhowr ariimod sabab uu yihin burburka qoyska , dhowrkan ariimod ayaa ah.
inla kala fogaado
dabeecada oo lagu kala duwanaado
dhaqanka oo lagu kala duwanaado
faragalin ku timada dhankastaba ahaata
ku dhaqanka diinta oo lagu kala duwanaado
saxib ka xun
qaarabada oo xumata
Hadaba waxa is waydin mudan samayn inteeleg ayay ku yeelata dhibatada furinku caruurta?
Samaynta uu furin ku ku yeesho caruurta waxa kamida arimahan so socda. Caruurta marka ay arkan waalidkodi oo is furaya waxa ku dhaca naxdiin iyo moral xumo ,gabi ahaanba waxa ka gurta farxada,
Caruurta qor waxaku dhaca da in ciil iyo calool xumo darted in ay dabeecadodu is badasho oo ay ku kacaan falal kala duwan , taaso suuro galinaysa in ay gabi ahaanba jaran xidhidhka qarabadodda,
Sida kalana waxbarashada caruurta oo hos u dhacda ,caruur badan oo fikirkoda waxbarasho ahaa mid aad uu sareeyey furinka ka hor ayaa markiiba hoos u dhac ku yimada murugada darteed.
Waxa jira caruur arkay furiinka waalidkooda waxayna samayn ku yeelatay mustaqbalka gurkoda danbe .
Caruurta waalidkodu is furan waxay samayn ku yeelatay wayahoda nolaaled.waxana ku bata murugada iyo iswaydinta su,aalo farabadan waxana ku yarata farxada wakhti ayay ku qadata inay laqabsadaan nolasha ay galeen.
Hadaba akhristoow xalinta burburka qoyska soomaliyeed kuma xalin karno qoral koban ama waraysiyo aan la yeelano dad kala duwan oo si kala duwaan u arka xalinta dhibatada furiinka .
Xalka EBe ayaa haaya lakin haddi aan katatabano waxa ugu muhiimsan ee aan odhan karno xalku wuu ka imanaya ugu horayn is waydi su,aasha ah.
1: Side looga hortagi kara burburka qoyska soomaliyeed ?
2:hadii uu yimaado khilafse sidaa loo xaliinnaya ?
Jawabaha su,aalaha ni waxay ku sahlaysa heelitanaka xalinta dhibaatada qoyska.
Helitanka sababaha keenay mashakilka waa mid ka mida xalinta khilafada ka
Dhexdhalata lamanaha .
1: dabeecada hadi lagu kala duwaan yahay waxay lagu xaliin karaya in laysku dulqato hanoqonina seef laboodayal
2: hadii u midkood saxib xun uu leeyahay waxa muhiim ah in uufiriyo danta qoyskisa si aanu uu burburin qoyskisu kana firsado taloyinka uu saxibki sinaayo
3: dhibatada dhaqale waa mid samayn ku leh burburka qoys ka soomaliyeed lakin dhibatada dhaqale waxa lagu xalin karaya in Ebe laysku xidho madama aynu nahay dad muslim ah samiirkana labadiyo,
Dulqad kana labadiyo
4: dhaqanka oo lagu kala duwanaado waxad ku xalin kartan in lays fahmo oo aydaan ufirsan dhaqanada yar yar eelagu kala dawanyahay oo aad eegtan ku badaan ee aad isagamidka tihiin
5: sida habdhaqanka diinta lagu kala duwaan yahay waxa lagu xalin karaya hadi ninku diinta yaqaan waa in uu gabadhisa baraa inta uu kudhamo sidoo kalena haddi gabadhu diinta garanayso inay ku cawisa ninkeda haddi kalena waa in uu ninku gabadhisa geeyo meelaha lagu barto diinta.
Ugu danbayn ti akhristow waxan maqalkayga ku so afmeerayaa marka hore in laga baqo ALLE
Loona laabto jidka , toosan oo ay qoysas badan kaga badbaadi karan burburka qoyska.waxanan ku latalin laha waladayda soomaliyeed meel kasto oojogan .samiirka in badiyo,diinta ku fara adayga ,dulqad yeesha,
Dhaqanka ku fara adayga,ayaaha caruurta ka taliyaa,hasal fududaniina,isku naxariista , ka wada tashada wax kasta oo ini soo wajaha lamanihina isla nool, qalad haddi uu yimadana sii wadajir aha loo xaliyo had iyo jeerna lagu dadaalo samiirka .si aynu uheela bulsho ka badbada burburka qoyska iyo dhibatada furiinka .
W/Q :Hinda Cabdi Sheikh
Dhibaatooyinka Laga Dhaxlo Xirashada Kabaha Ciribta Dheer Dhibaatooyinka Laga Dhaxlo Dhafarka Badan Iyo Talada Dhakhtarka Xanuunada Iyo Dhibaatooyinka Laga Qaado Hurdo Yaraanta Dhibaatooyinka Balwada Cuntada